I-Lakeside Cabins (amakhabhini ama-2 kanye namakamu amatende ama-3!) - I-Airbnb
I-Lakeside Cabins (amakhabhini ama-2 kanye namakamu amatende ama-3!)
Le phakheji ihlanganisa ukufinyelela kumakhabethe amabili neziza ezintathu zamatende, okuqinisekisa ukuzizwisa okuzimele kokukhempa. Sicela uqaphele ukuthi ukukhempa kulezi zindawo "kukudala"... awekho amanzi, ugesi, noma izindawo zokugeza. I-privy iyatholakala kule ndawo yokukhempa. Amanzi aphuzwayo, izindlu zangasese, neshawa kuyatholakala ngaphesheya kwechibi. Uzoba nedokodo lakho nendawo yokubhukuda.
ILake Heron iyipharadesi elicashile ePerry County elinamahektha angama-240 ehlathi kanye nechibi elingamahektha ayi-10 elinokudoba okuhle kakhulu.